Gudoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti oo booqday Muqdisho (Sawiro) – Radio Daljir
Diseembar 12, 2012 8:09 b 0
Muqdisho, Dec 12, Guddomiyaha Baarlamanka dalka Jabuuti Mudane Idiris Aar Naaquud Cali iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka soo degay Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho halkaasoo siweyn loogu soo dhoweeyey.
Waftiga gudoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti, ayaa waxaa garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cade kusoo dhoweeyey Gudoomiyaha Barlamaanka Soomaaliya Md Jawaari iyo xubno ka tirsan xildhibaanada Baarlamaanka Federalka ah ee Soomaaliya.
Booqashada Gudoomiyaha Baarlamaanka ee dalka Jabuuti ayaa lagu sheegay inay tahay sidii ay wada hadalo u yeelan lahaayeen gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ayna uga wada hadli lahaayeen xoojinta xiriirka labada Baarlamaan ee Soomaaliya iyo Jabuuti.
Ujeedada booqashada guddoomiyaha baarlamaanka dalka Jabuuti ayaa la sheegay inay tahay sidii uu wadahadalo ula yeelan lahaa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed si loo sii xoojiyo xiriirka ka dhexeeya labada baarlamaan.
Safarka Idiris Aar Naaquud Cali ?uu ku tegey Muqdisho ayaa qeyb ka ah booqashooyin ay mas?uuliyiinta labada dal isweydaarsanayeen taasi oo lagu xoojinayo xiriirka labada dal.
Waxaa dhowaan dalka Jabuuti booqasho ku tegey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu horkacayay iyagoo wadahadalo la yeeshay madaxda dalka Jabuuti.?
Ciidamada nabad ilaalinta ee ururka Midowga Afrika ka jooga dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah ciidamo ka socda dalka Jabuuti oo badankood ay ku sugan yihiin magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.?